Waa maxay shaqooyinka horyaalla tubta siyaasadaa loo dhan yahay? - Caasimada Online
Home Warar Waa maxay shaqooyinka horyaalla tubta siyaasadaa loo dhan yahay?
Waa maxay shaqooyinka horyaalla tubta siyaasadaa loo dhan yahay?
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay 18-ka bishii Jannaayo barnaamijka Tubta Siyaasadda loo Dhan Yahay ee 2020, kaasi oo lagu saleeyey habka ay noqon doonto doorashada xilligaasi dhici doonta.
Quburo ka socda xafiiska Ra’iisulwasaaraha ayaa sharraxaad dheeri ah ka bixiyey waxa ay tahay tubta siyaasadda taasi oo qeexeysa doorashada dhici doonta iyo in la soo afjaro howlaha xasaasiga ah.
Golaha Wasiirada ayaa dood dheer ka dib ansixiyay tubta siyaasadda loo dhan yahay oo muhiim u ah geeddi socodka doorashooyinka dalka.
Shirkii golaha amniga ee 21 Febraayo lagu soo gaba-gabeeyay Muqdisho ayaa lagu lafo guray qeybsiga kheyraadka dalka, siyaasadda iyo amniga.
Hannaanka loo marayo doorashada soo socota wali ma cadda, waana sababta loo aas-aasay tubta siyaasadda loo dhan yahay in ay ka soo talo bixiso qaabka doorashada Soomaaliya ay noqoneyso.
Haddaba waa maxay shaqada laga sugayo in ay qabato tubta siyaasadda loo dhan yahay in ay qabato? Xaliimo Yarey oo ah madaxa guddiga doorashooyinka madaxabannaan ayaa ka warrantay:
“Guddiga hadda la magcaabay waa guddi la shaqeynayo madaxda qaranka oo ah haddii la soo qoro sharciga doorashooyinka qaranka in ay kala taliyaan madaxdooda, waa in ay dhahaan habkaan ayaa ugu fiican in doorashooyinka loo sameeyo, marka ay isku soo raacaan ayaa annagu fulineynaa waxa ayna ka shaqeyn doonaan dib-u heshiisiinta”.
Fahan badan kama heystaan shacabka Soomaaliyeed tubta siyaasadda loo dhan yahay iyo shaqooyinka looga baahan yahay in ay qabtaan si loogu guuleysto doorashada soo socota.
Abshir Maxamed Barre oo ah aqoonyahan waxa uu yiri: “ Dowladda waxa ay go’aaan ku gaartay in loo gudbi doono doorasho qof iyo cod ah, sidaas darteed waxaa loo xil saaray hannaankii ay ku diyaarin lahaayeen”.
28-ka Maarso kulanka Golaha Amniga ee ka dhici doona Baydhaba waxaa lagu go’aamin doonaa sida doorashada dalka ay noqon doonto.